Misafidiana tonian-dahatsoratra ho an'ny programa Python - momba Python
Informatika Python Programming
Mifidy tonian-dahatsoratra ho an'ny programa Python
Inona no atao hoe Tonian-dahatsoratra?
Ho fandaharam-potoana Python, ny ankamaroan'ny mpamoaka lahatsoratra dia hanao. Mpanonta lahatsoratra iray dia programa izay mamonjy ny rakitrao tsy misy formata. Ireo processeurs toy ny MS-Word na ny OpenOffice.org Writer dia ahitana ny fampahafantarana formata rehefa mitahiry rakitra - izany no fomba ahafantaran'ny programa ny fahasamihafana lahatsoratra sy ny fanasoketana ny hafa. Tahaka izany ihany koa, ireo tonian-dahatsoratra HTML ireo dia tsy mamela ny lahatsoratra ho sora-tanana ho sora-baventy, fa ho toy ny lahatsoratra misy marika famantarana. Ireo marika ireo dia natao hijerena visa, fa tsy amin'ny famerenana. Noho izany, rehefa mamaky ilay lahatsoratra ny ordinatera ary manandrana manatanteraka izany, dia mamely, manafintohina, toy ny hoe miteny hoe: "Ahoana no andrasanao hamaky azy io ?" Raha tsy azonao ny antony anaovana izany, dia azonao atao ny miverina mitsidika ny fomba famakiana ordinatera .
Ny tena fototry ny fahasamihafana misy eo amin'ny tonian-dahatsoratra sy ny rindrambaiko hafa izay mamela anao hanova lahatsoratra dia ny tsy ahafahan'ny mpamorona lahatsoratra manitsy ny formata. Noho izany, azo atao ny mahita lahatsoratra amin'ny endri-tsoratra an'arivony, toy ny processeur iray. Ny toetra manamarina dia ny mametraka ny lahatsoratra ho lahatsoratra tsotra sy tsotra.
Criteria sasany amin'ny fisafidianana ny tonian'ny lahatsoratra
Ho an'ny programa Python, dia misy ny tonian-dahatsoratry ny mpanonta ara-baiboly. Raha tonga miaraka amin'ny editor-ineny azy, Python, IDLE, dia tsy voafetra ho an'ny fampiasana izany ianao. Ny mpanoratra tsirairay dia hanana lozisialy sy minus. Rehefa mandinika izay mety ho ampiasainao ianao, dia misy hevitra vitsivitsy tokony hotadidinao:
Ny rafi-pandaharana ampiasainao. Miasa amin'ny Mac ve ianao? Linux na Unix? Windows? Ny fepetra voalohany tokony hitsaranao ny maha-mety ny tonian-dahatsoratra iray dia ny hoe izy io no miasa amin'ny sehatra ampiasainao. Ny tonian-dahatsoratra sasany dia sehatra tsy miankina (miasa amin'ny rafitra fiasa mihoatra ny iray), fa ny ankamaroany dia voafetra ho an'ny iray. Ao amin'ny Mac, ny tonian-dahatsoratra matihanina indrindra dia ny BBEdit (izay ny TextWrangler dia maimaim-poana). Ny fametrahana Windows rehetra dia tonga amin'ny Notepad, fa ny fanoloana tsara vitsivitsy hijerena dia Notepad2, Notepad ++, ary TextPad. Amin'ny Linux / Unix, maro no misafidy ny mampiasa an'i GEdit na Kate, na dia mifidy ny JOE na ny mpanoratra hafa aza ny hafa.
Te hanana editor ianao na zavatra hafa misy endri-javatra hafa ve? Amin'ny ankapobeny, ny endri-javatra bebe kokoa amin'ny tonian-dahatsoratra, ny henjana dia ny mianatra. Na izany aza, rehefa mianatra azy ireo ianao, dia matetika no mandoa vola be. Misy mpamoaka barebones sasantsasany izay voalaza etsy ambony. Eo amin'ny lafiny iray manontolo, ny tonian-dahatsoratry ny multi-platform dia mandroso amin'ny loha-doha: vi sy Emacs. Ity farany dia fantatra fa manana fari-pahaizana fianarana tsy mitsaha-mitombo, fa mandoa be dia be indray mandeha indray no mianatra azy (famoahana tanteraka: mpampiasa Emacs malala aho ary amizao, manoratra ity lahatsoratra ity amin'ny Emacs).
Ny fahaiza-manaon'ny tamba-jotra rehetra? Ankoatra ny endriky ny birao, misy tonian-dahatsoratra sasany afaka atao mba haka ireo rakitra amin'ny tambajotra. Ny sasany, toa an'i Emacs, dia manolotra ny fahafahana manova rakitra an-tserasera amin'ny fotoana mety aza, tsy misy FTP, noho ny fisintonana fiarovana.
Mpanonta Text Recommended
Izay lohatenin-kevitra nofidianao dia miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra iainanao amin'ny solosaina, ny zavatra ilainao hatao, ary ny sehatra izay ilainao hanaovana izany. Raha vaovao amin'ny mpandrindra lahatsoratra ianao dia manolotra soso-kevitra sasantsasany izay ahafahan'ny tonian-dahatsoratra azonao ampiasaina indrindra amin'ny lesona ao amin'ity tranonkala ity:
Windows: TextPad dia manolotra traikefa an-tserasera tsotra miaraka amin'ireo endri-javatra vitsivitsy hanampy anao. Ny orinasa rindrambaiko sasantsasany dia mampiasa ny TextPad ho toy ny tonian-dahatsoratra natokana ho an'ny fandikàn-teny fandikana teny.
Mac: BBEdit no mpanoratra malaza indrindra amin'ny Mac. Fantatra amin'ny fanolorana karazana endri-javatra fa raha tsy miala amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa.
Linux / Unix: GEdit na Kate manolotra ny traikefa mpampiasa indrindra ary azo ampitahaina amin'ny TextPad.
Platform Mahaleo: Mazava ho azy, ny fizarana Python dia tonga amin'ny editor-tsara tsara indrindra amin'ny IDLE, ary mandeha any amin'ny toerana rehetra i Python. Ireo olon-tonian-dahatsoratry ny mpampiasa hafa dia ny Dr Python sy Eric 3. Mazava ho azy fa tsy tokony hadino velively ny momba ny vi sy ny Emacs.
Ampiasao ny Shelve mba hamonjena ireo zavatra ao amin'ny Python
Manangana tranonkala tsotra ao Python
Ny String Python
Ahoana ny fampiasana pickle hamonjena ireo zavatra ao amin'ny Python
Manangana mpamaky RSS amin'ny python
Mampiditra Data ao amin'ny PostgreSQL Database
"Hello World!" Tutorial amin'ny Python
Ahoana ny famakafakan-dàlana amin'ny alalan'ny Python
Inona no atao hoe Python?
Ahoana no Mamorona Kalandrien'ny HTML ao Python Dynamically
Ny fomba famakiana sy fanoratana ireo rakitra ao Perl
Kasco Golf: Company Info, ny kliobany ary ny toerana hahitana azy ireo
Dingana Lehibe ho amin'ny fidirana ao amin'ny Colleges of Nevada efa-taona
Novambra: Facts mahaliana, fialantsasatra, hetsika ara-tantara, ary maro kokoa
Mianara mikasika ny fampiharana, ny tantara ary ny fotoana i Hajj
Hevitra ho an'ny sary hosodoko sy hosodoko
Fakan-kevitra momba ny fahitana kilasy any Japon Feudal
Nutmeg | Ny tantaran-tsakafo tsy misy sakafo mahasalama
Dos sy Don'ts noho ny fangatahana taratasy fangatahana ho an'ny mpianatra mianatra
Ballon d'Or mpandresy
Biografian'ny mpanoratra John Steinbeck
Aiza no tokony hisy batisan'ny katolika?
Inona no dikan'ny OEM?
10 Zava-mahaliana Tokony ho Fantatry ny Andro Fanokanana Azy
Tula de Hidalgo (Meksika) - Tanànan'i Toltec renivohitr'i Tollan
Ahoana ny fomba firesahana amin'ny zanakao kristianina mikasika ny Firaisana
Fanomezana akanjo iombonana
Torolalana ho an'ireo mpitsikilo ho mpandihy gitara